MAYELANA NE-JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD | IJIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD
I-JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD yasungulwa ngo-2008, inguchwepheshe ekukhiqizeni ikhoyili yensimbi engagqwali, ipuleti lensimbi engagqwali, ipayipi lensimbi, insimbi engagqwali ibha , amaphrofayli ensimbi engagqwali nemikhiqizo yengxubevange. Eminyakeni eyi-12 edlule, Imboni yeTISCO isungule ubambiswano lwamasu namabhizinisi amaningi awaziwayo akhuphuka nawasezansi njenge: MASTEEL, BAOSTEEL, TISCO, ZPSS, RIZHAO, JIGANG, SHOUGANG IQEMBU, SSAB, JISCO. Siphinde sibhekane nemikhiqizo ye-alloy nemikhiqizo yensimbi engenazinsimbi engabili engenalutho yemikhiqizo yezwe eyinhloko efanaUchungechunge lwe-Inconel, Uchungechunge lweMonel, Uchungechunge lweHastelloy, iTitanium njalo njalo.
Ngemuva kweminyaka eyi-12 yentuthuko esheshayo, iTISCO Industrial isibe ibhizinisi lesimanje lesensimbi elibanzi elisebenza ngokucubungula, ukuthengisa kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe emkhakheni wemikhiqizo yensimbi engagqwali. ITisco Industrial inezinsizakusebenza eziyinhloko zokucubungula insimbi ezihlinzeka ngamapulatifomu wokucubungula ngobuchwepheshe:ukusika, ukugaya, ukwakha, ukuwelda, ukwelashwa ukushisa, imishini nokufutha. Ngaphezu kwalokho, iTisco Industry futhi inesikhungo sesimanje sokuhlola imishini namakhemikhali ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo efanelekile.
I-Jiangsu TISCO Industrial isungule izikhungo zensizakalo eziyi-10 eWuxi, Wuhan, Hangzhou, Tianjin, Taiyuan, Zibo, Jingjiang, Tai'an, Jinan naseJiaxing eChina. Njengamanje, iTisco Industry ihlanganisa indawo engu-150,000Futhi une 1,300 abasebenzi. AbakwaTisco bazimisele ngokuba "ukucutshungulwa kwensimbi nokunikezela isikhungo semboni yokukhiqiza"futhi"indawo yesitolo esitolo sensimbi engagqwali"eChina. Ngemuva kokuqamba izinto ezintsha nokuphishekela ubuhle, iTisco Industry inabahlinzeki abaningi abadume umhlaba wonke, abane Amathani ayi-100,000 yensimbi engagqwali esitokisini minyaka yonke.
Ibhizinisi lethu liyakhula ngenxa yentuthuko eqhubekayo kule minyaka, futhi manje sakha inkampani entsha ebizwa ngeJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd. iJiangsu Joyina i-Industrial Co, Ltd manje iyigatsha leJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd.